Kedu ihe onye ọka iwu na -eme? - Law & More B.V.
blog » Kedu ihe ọkaiwu na-eme?
Kedu ihe ọkaiwu na-eme?
Mmebi mebiri n'aka onye ọzọ, ndị uwe ojii jidere ya ma ọ bụ chọọ ịkwado ikike gị: ikpe dị iche iche nke enyemaka onye ọka iwu abụghị n'ezie okomoko na -enweghị isi yana n'okwu obodo ọbụlagodi ọrụ. Mana kedu ihe onye ọka iwu na -eme na gịnị kpatara o ji dị mkpa ịkpọ onye ọka iwu?
Usoro iwu Dutch zuru oke ma kwenye. Iji zere nghọtahie na ịkọwa ebumnobi nke iwu n'ụzọ ziri ezi, a tụlere nhọrọ okwu ọ bụla ma tinyekwa usoro dị mgbagwoju anya iji hụ na ụfọdụ ihe nchekwa iwu kwadoro. Mwepu bụ na ọ na -esikarị ike ịmegharị ụzọ n'ime nke a. A zụrụ onye ọka iwu ịtụgharị iwu ma mara ụzọ ya site 'n'oké ọhịa' dị ka ọ na -adịghị. N'adịghị ka onye ọka ikpe ma ọ bụ onye ọka iwu ọha, onye ọka iwu na -anọchite anya ọdịmma ndị ahịa ya. Na Law & More onye ahịa na ihe ga -aga nke ọma na ikpe ziri ezi maka onye ahịa na -ebute ụzọ. Ma gịnị kpọmkwem ka onye ọka iwu na -eme? Na ụkpụrụ, nke a dabere na ikpe ị na -etinye onye ọka iwu na ya.
Enwere usoro ikpe abụọ nke onye ọka iwu nwere ike bidore gị: usoro arịrịọ na usoro ịkpọ oku. N'ihe gbasara okwu nchịkwa, anyị na -arụ ọrụ site na usoro ịrịọ arịrịọ, nke a ga -akọwakwa nke ọma na blọọgụ a. N'ime iwu mpụ, ị nwere ike nweta akwụkwọ ịkpọ oku. A sị ka e kwuwe, ọ bụ naanị Ụlọ Ọrụ Ikpe Ọha na eze nwere ikike ikpe mpụ mpụ. Ọbụlagodi mgbe ahụ, onye ọka iwu nwere ike inyere gị aka na itinye akwụkwọ mkpesa, n'etiti ihe ndị ọzọ.
Mgbe ịmalite usoro arịrịọ, dị ka aha ya na -egosi, a na -arịọ onye ọka ikpe arịrịọ. Ị nwere ike iche maka okwu ndị dị ka ịgba alụkwaghịm, kagbuo nkwekọrịta ọrụ yana idobe ya n'okpuru nlekọta. Dabere na ikpe ahụ, enwere ike ma ọ bụ ọ gaghị abụ onye nnọchi anya. Onye ọka iwu ga -akwadebere gị arịrịọ nke na -emezu ihe niile a chọrọ n'aka gị wee depụta arịrịọ gị ka o kwere mee. Ọ bụrụ na enwere onye nwere mmasị ma ọ bụ onye a na -azara ọnụ, onye ọka iwu gị ga -azaghachi nkwupụta nkwupụta ọ bụla.
Ọ bụrụ na ndị otu ọzọ amalitela usoro arịrịọ gị na gị bụ ndị mmegide ma ọ bụ ndị nwere mmasị, ị nwekwara ike ịkpọtụrụ onye ọka iwu. Onye ọka iwu nwere ike nyere gị aka idepụta nkwupụta agbachitere yana, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, jikere maka ịnụrụ okwu ọnụ. N'oge ikpe ahụ, onye ọka iwu nwekwara ike ịnọchite anya gị, onye nwekwara ike ịrịọ mkpesa ma ọ bụrụ na ị kwenyeghị na mkpebi onye ọka ikpe.
Na -akpọ usoro
N'ọnọdụ ndị ọzọ niile, a na -amalite usoro ịkpọ oku, ebe a na -arịọ echiche onye ọka ikpe na otu esemokwu. Ịkpọ akwụkwọ ịkpọ oku bụ n'ụzọ bụ isi ọkpụkpọ oku ịpụta n'ụlọ ikpe; mmalite nke usoro. N'ezie, onye ọka iwu gị nọ ebe ahụ ka ọ gwa gị okwu n'oge ikpe a, kamakwa ọ ga -enyere gị aka tupu ịnụ ikpe a na mgbe emechara. Ịkpọtụrụ onye ọka iwu na -amalitekarị mgbe ịnata akwụkwọ ịkpọ oku ma ọ bụ mgbe ịchọrọ iziga ya n'onwe gị. Mgbe ịmalitere usoro ahụ n'onwe gị wee bụrụ onye na -azọrọ, ọ bụghị naanị onye ọka iwu na -adụ ọdụ ma ịmalite usoro a na -amị mkpụrụ, mana ọ na -edekwa akwụkwọ ịkpọ oku nke ga -emerịrị usoro dị iche iche. Tupu idepụta ọkpụkpọ oku ahụ, onye ọka iwu nwere ike, ọ bụrụ na ọchọrọ, buru ụzọ kpọtụrụ ndị na -emegide ya n'akwụkwọ iji nweta azịza udo, na -ebidoghị usoro ikpe. Ọ bụrụ na agbanyeghị n'usoro ịkpọ oku, onye ọka iwu ga -elekọtakwa onye ọzọ na -emegide ya iji hụ na usoro a na -aga nke ọma. Tupu onye ọka ikpe anụrụ okwu ahụ ọnụ, a ga -enwe okirikiri ederede nke ndị otu abụọ nwere ike ịzaghachi ibe ha. Akwụkwọ ndị a na -ezighachi azụ na -abụkarị nke onye ọka ikpe na -ekpe n'ọnụ. N'ọtụtụ ọnọdụ, agbanyeghị, mgbe edechara ya na onye ogbugbo ya, ọ naghị abịazi nzukọ, site na nhazi n'etiti ndị otu abụọ. Ikpe gị ọ bịara na ntị ma ị kwenyeghị na mkpebi ikpe ahụ ka ị gachara? N'okwu ahụ kwa, onye ọka iwu gị ga -enyere gị aka ịrịọ mkpesa ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Usoro mkpesa nke iwu nchịkwa
Ọ bụrụ na ị kwenyeghị na mkpebi nke ụlọ ọrụ nhazi (nzukọ gọọmentị) dị ka CBR ma ọ bụ ime obodo, ị nwere ike jụ. Ị nwere ike nweta akwụkwọ ozi nke onye ọka iwu nke nwere nghọta maka ọganiihu nke itinye akwụkwọ mkpesa yana onye maara arụmụka a ga -ewepụta. Ọ bụrụ na ịdebanye aha mkpesa, ahụ ga -eme mkpebi na mkpesa (bob). Ọ bụrụ na ị kwenyeghị na mkpebi a, ị nwere ike tinye akwụkwọ ngosi akwụkwọ mkpesa. Kedu otu, dịka ụlọ ikpe, CBb, CRvB ma ọ bụ RvS, a ga -etinyerịrị arịrịọ dabere n'okwu gị. Onye ọka iwu nwere ike inyere gị aka nyefee ikike ịrịọ arịrịọ maka ikike kwesịrị ekwesị yana, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, chepụta nzaghachi n'okwu nzere nke ụlọ ọrụ nhazi. N'ikpeazụ, onye ọka ikpe ga -ekpebi ikpe ahụ ka emechara okwu ọnụ. Ọ bụrụ na ị kwenyeghị na mkpebi onye ọka ikpe, ị ka nwere ike ịrịọ arịrịọ n'okpuru ọnọdụ ụfọdụ.
(Subpoena) iwu mpụ
Na Netherlands, a na -ebo ndị na -ahụ maka ikpe ọha ebubo nyocha na ikpe mpụ mpụ. Ọ bụrụ na ị natala akwụkwọ ịkpọ oku n'aka ndị ọrụ na -ahụ maka ikpe ọha, a na -enyo gị enyo na ị mere mpụ mgbe emechara nyocha nke mbụ. Ịchụ onye ọka iwu bụ ihe amamihe dị na ya. Ikpe omempụ nwere ike jupụta n'ụzọ iwu yana inyocha akwụkwọ chọrọ ahụmịhe. Onye ọka iwu nwere ike jụ ịkpọ oku ka enwere ike igbochi ọnụnụ ọnụnụ. N'ọtụtụ ọnọdụ, a na -eji ọnụ ekwu okwu gbasara ikpe mpụ n'ihu ọha. Onye ọka iwu ga -enwe ike ịnọchite anya gị nke ọma n'oge a na -ekwu okwu ọnụ. Uru nke itinye onye ọka iwu, dịka ọmụmaatụ mgbe achọpụtasịrị njehie emere n'oge nyocha ahụ, nwere ike gbatị ruo n'ịhapụ ya. Ọ bụrụ n'ikpeazụ ị kwenyere na mkpebi onye ọka ikpe, ị nwere ike ịrịọ mkpesa.
Onye ọka iwu nwere ike ịmere gị ihe tupu ịnata akwụkwọ ịkpọ oku. Onye ọka iwu nwere ike, n'etiti ihe ndị ọzọ, inye nkwado na enyemaka n'oge ajụjụ ndị uwe ojii ma ọ bụ nye ndụmọdụ gbasara mpụ nke a na -enyo enyo na ya.
Agbanyeghị na ị nwere ike were onye ọka iwu bido otu n'ime usoro ndị a dị n'elu, ndị ọka iwu nwekwara ike nyere gị aka na mpụga ụlọ ikpe. Dịka ọmụmaatụ, onye ọka iwu nwekwara ike idere gị akwụkwọ ozi n'ọnọdụ azụmahịa. Ọ bụghị naanị na a ga -ede akwụkwọ ozi dịka ọchịchọ gị si dị nke na -etinye mkpịsị aka na ebe ọnyá, kamakwa ị ga -enwetakwa ihe ọmụma gbasara iwu gbasara okwu gị. Site n'enyemaka nke onye ọka iwu, a ga -enyere gị aka n'ihe ị na -eme na ihe ị na -eme na ihe ịga nke ọma gị bụ eziokwu karịa naanị olileanya.
Na nkenke, onye ọka iwu na -adụ ọdụ, na -agbarịta ụka ma na -agba akwụkwọ n'okwu gbasara iwu gị ma na -eme ihe maka ọdịmma onye ahịa ya. Maka atụmanya kachasị mma, ị ga -erite uru site na ịkpọ onye ọka iwu.
Ị chere na ịchọrọ ndụmọdụ ọkachamara ma ọ bụ enyemaka iwu site n'aka onye ọka iwu pụrụ iche mgbe ị gụsịrị akụkọ dị n'elu? Biko kpọtụrụ Law & More. Law & MoreNdị ọka iwu ọkachamara na ngalaba iwu dị iche iche ma nwee obi ụtọ inyere gị aka site na ekwentị ma ọ bụ ozi-e.
Previous Post Ego nkwụghachi ụgwọ maka nkwekọrịta ọrụ: kedu ka ọ si arụ ọrụ?
Next Post Kedu mgbe achọrọ onye ọka iwu?